Ahoana no hialana amin'ny fiovan'ny toetr'andro: toro-hevitra tsara indrindra | Green Renewable
Ny fiovan'ny toetr'andro no olana lehibe indrindra atrehin'ny olombelona amin'izao taonjato izao. Miova ny toetr'andro eto amintsika ary miaraka amin'izany koa ny fiovaovan'ny toetr'andro sy ny lamin'ny atmosfera. Ny tena mahatonga an'io fiovan'ny toetr'andro io dia avy amin'ny olombelona. Mihasimba hatrany ny asa ara-toekarenan'olombelona ary manimba ny tontolo iainana voajanahary. Ny tsirairay amin'ny maha-olona azy dia afaka manao hetsika isan-karazany hisorohana izany tsy hitombo. Maro ny olona manontany tena ny fomba hisorohana ny fiovan'ny toetr'andro.
Noho izany, miresaka momba ny torolàlana tsara indrindra hianarana ny fomba hisorohana ny fiovan'ny toetr'andro isika.
1 Hetsika hianarana ny fomba hisorohana ny fiovan'ny toetr'andro
1.1 Mampihena ny entona
1.2 Mitsitsia angovo
1.3 Fitaovana fanaraha-maso
1.4 Sokafy ny jiro LED
1.5 Ahoana no hialana amin'ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny alàlan'ny fanodinana
1.6 Kely ny fonosana
1.7 Manatsara ny sakafo
1.9 Mampiasà rano mafana kokoa ary tohano ireo azo havaozina
Hetsika hianarana ny fomba hisorohana ny fiovan'ny toetr'andro
Mampihena ny entona
Raha te handray anjara mavitrika amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetr'andro ianao dia ampiasao amin'ny antonony ny fiaranao. Mampiasà fitaovam-pitaterana maharitra araka izay azo atao, toy ny bisikileta na mampiasa fitateram-bahoaka bebe kokoa. Raha ny halavirana lavitra, ny zavatra maharitra indrindra dia ny lamasinina, ary ambonin'ny fiaramanidina, izy no tompon'andraikitra amin'ny ampahany betsaka amin'ny famoahana gazy karbonika eny amin'ny rivotra. Raha tsy maintsy mampiasa fiara ianao, Ataovy ao an-tsaina fa isaky ny kilometatra ataonao haingana dia mampitombo CO2 ary mandany vola be. Ny litatra isan-tsokajiny lanin'ny fiara dia mampiseho gazy karbonika 2,5 kilao eo ho eo avoaka any amin'ny atmosfera.
Miaraka amin'ny torolalana kely ao an-trano dia afaka mianatra ny fomba hisorohana ny fiovan'ny toetr'andro isika amin'ny alàlan'ny fitsitsiana angovo. Andeha hojerentsika hoe inona ireo torolalana ireo:
Aza avela ao amin'ny mode standby ny tele sy ny solosainao. Mandeha adiny telo isan'andro ny fahitalavitra iray (amin'ny ankapobeny, mijery fahitalavitra ny Eoropeana) ary mijoro mandritra ny 21 ora sisa, mandany 40% amin'ny angovo manontolo amin'ny fomba fijanonana.
Aza avela hiditra amin'ny famatsiana herinaratra foana ny charger findainao, na dia tsy mifandray amin'ny telefaonina aza, satria mbola handany herinaratra.
Ahitsio foana ny thermostat, na fanafanana na rivotra.
Fantatrao ve fa afaka mandray anjara amin'ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro ianao amin'ny fampiasana am-pahamalinana sy tompon'andraikitra ny fitaovana elektrika ao an-tranonao? Manome toro-hevitra ho anao izahay:
Manarona vilany raha ny mahandro sakafo dia fomba tsara ahafahana mitsitsy angovo. Ny tsara kokoa dia ny fatana fanerena sy ny etona, izay afaka mitahiry angovo 70%.
Ampiasao ny fanasan-damba sy ny milina fanasan-damba rehefa voky ihany. Raha tsy izany dia ampiasao programa fohy. Tsy ilaina ny mametraka mari-pana ambony, satria ny fanadiovana amin'izao fotoana izao dia mahomby na dia amin'ny hafanana ambany aza.
Tadidio izany Ny vata fampangatsiahana sy ny vata fampangatsiahana dia handany angovo bebe kokoa raha eo akaikin'ny afo na boiler. Raha antitra izy ireo, dia levona tsindraindray. Ny vaovao dia manana tsingerina defrost mandeha ho azy izay efa ho avo roa heny noho ny fahombiazany. Aza asiana sakafo mafana na mafana ao anaty vata fampangatsiahana: mitsitsy angovo ianao raha avelanao mangatsiaka aloha.
Sokafy ny jiro LED
Afaka manolo ny takamoa mahazatra amin'ny takamoa mitsitsy angovo mitahiry gazy karbonika mihoatra ny 45 kilao isan-taona. Raha ny marina, ny faharoa dia lafo kokoa, fa mora kokoa amin'ny fiainanao. Araka ny voalazan’ny Vaomiera Eoropeanina, ny iray amin’izy ireo dia afaka mampihena hatramin’ny 60 euros ny saran-jiro.
Ahoana no hialana amin'ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny alàlan'ny fanodinana
Ny tanjon'ny 3R dia ny hanatsorana ny ady amin'ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny alàlan'ny hetsika telo:
Vitsy ny fandaniana azy ary mahomby kokoa.
Ampiasao ny tsena faharoa mba hanomezana fahafahana hafa ho an'ny zavatra tsy ampiasainao intsony na hahazoana zavatra tsy ilain'ny hafa. Hitsitsy vola ianao ary ho afaka hampihena ny fandaniana. Manaova fanazaran-tena koa.
Recycle packaging, fako elektronika, Sns Fantatrao ve fa afaka mitahiry gazy karbonika maherin'ny 730 kg isan-taona ianao amin'ny fanodinana afa-tsy ny antsasaky ny fako ateraky ny tranonao?
Kely ny fonosana
Misafidiana vokatra misy fonosana kely kokoa: tavoahangy 1,5 litatra dia mamokatra fako kely kokoa noho ny tavoahangy 3 litatra.
Rehefa miantsena ianao dia ampiasao kitapo azo ampiasaina.
Fadio ny mampiasa famafazana mando sy taratasy be loatra. Raha mampihena 10% ny fako dia azonao atao ny misoroka ny famoahana gazy karbonika 1.100 kg.
Manatsara ny sakafo
Ny sakafo ambany karba dia midika hoe mihinana hendry kokoa sy miady amin'ny fiovan'ny toetr'andro.
Ahena ny fihinanana hena - Ny biby fiompy dia iray amin'ireo loto lehibe indrindra amin'ny atmosfera - ary mampitombo ny fihinanana voankazo sy legioma ary legioma.
Mividiana vokatra eo an-toerana sy ara-potoana: Vakio ny etikety ary hanjifa vokatra avy amin'ny fiaviana akaiky mba hialana amin'ny fanafarana izay mihevi-tena ho famotsorana fanampiny.
Manjifa vokatra ara-potoana ihany koa mba hialana amin'ny fomba famokarana hafa tsy dia maharitra.
Miezaha mihinana vokatra organika bebe kokoa satria vitsy kokoa ny pestiside sy akora simika hafa ampiasaina amin'ny famokarana.
Amin'ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro dia tsy maintsy tadiavina ny fiarovana ny vondrona ala:
Halaviro ny fanao mety hampidi-doza ny afo, toy ny fandrahoan-tsakafo amin'ny toerana voajanahary.
Raha tsy maintsy mividy hazo ianao dia miloka miaraka amin'ny fanamarinana na tombo-kase avy amin'ny fiaviana maharitra.
Mamboly hazo. Ny hazo tsirairay dia afaka mitroka gazy karbonika hatramin'ny taonina, ka hanampy amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetr'andro ianao.
Mampiasà rano mafana kokoa ary tohano ireo azo havaozina
Ny angovo be dia be ilaina mba hanafanana ny rano. Ireto misy hetsika sasany manohitra ny fiovan'ny toetr'andro izay hitsitsy vola ihany koa:
Mametraha mpandrindra ny fikorianan'ny rano ao anaty douche ary hisoroka ny famoahana gazy karbonika mihoatra ny 100 kilao isan-taona ianao.
Sasao amin'ny rano mangatsiaka na mafana dia mitahiry CO150 2 kilao ianao.
Mitsitsy rano mafana ianao ary mampiasa angovo avo efatra heny raha mandro fa tsy mandro.
Vonoy ny paompy rehefa miborosy nify.
Ataovy azo antoka fa tsy mitete ny paompyo. Mety ho very rano ampy hamenoana koveta fandroana ao anatin'ny iray volana ny rano mitete.
Farany, hetsika iray hafa azonao atao hiadiana amin'ny fiovan'ny toetr'andro dia ny fisafidianana ny angovo maitso sy ny fampiroboroboana ny famokarana angovo azo havaozina toy ny masoandro, rivotra, rano, sns.
Manantena aho fa amin'ny alalan'ireo torohevitra ireo dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny fomba hisorohana ny fiovan'ny toetr'andro ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » Ahoana no hialana amin'ny fiovan'ny toetr'andro